Yaa ku soo baxay kuraasta Aqalka Sare ee lagu doortay Baydhabo? | KEYDMEDIA ONLINE
BAYDHABO, Soomaaliya - Waxaa dhawaan soo gabagaboday doorashada shan xildhibaan oo ka mid noqonaya Aqalka sare ee Baarlamaanka 11-aad ee Dowladda Federaalka, taas oo ka dhacday Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay.
Sida hore loo saadaalinayay Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa soo saaray shaqsiyaad intooda badan ay xigto ama xidid yihiin, oo u badan xubno ay isla diyaariyeen isaga iyo taliyaha NISA, Fahad Yaasiin.
Hadaba Keydmedia Online, waxa ay kuu soo koobeysaa xogaha ku gadaaman shanta Sanatar ee dhawaan ka soo baxaday Baydhabo.
Kursiga 1aad - Zamzam Ibraahim Cali, ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqta Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxayna kursiga lambarkiisu yahay UH24, kaga adkaaday, Shariifo Xaaji Cusmaan Ibraahim, oo ahayd musharrax maqaar saar ah.
Si guud 92 xildhibaan ayaa codeeyay, 81 cod waxaa heshey Zamzam Ibraahim, Shariifo Cusmaan ayaa iyana heshay 4 cod oo kaliya, halka 7 cod halaabeen. Kursigaan waxaa leh beesha Digil, jiido.
Samsam Ibraahim Cali, waxa ay afrtii sano ee la soo dhaafay ku fadhisay kusigan, waxayna qeyb ka ahayd Guddiga Garsoorka, Arrimaha Diinta & Awqaafta, ee Aqalka sare, waxayna ka mid ahayd xildhibaanno uu CV-gooda gacanta ku hayay Kullane Jiis oo ah gacan yaraha Fahad Yaasiin.
Kursiga 2-aad – Ayaan Aadan Cabdullahi, ayaa iyana noqotay haweeneydii labaad ee ku biirta Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxayna kursiga lambarkiisu yahay UH2 kaga adkaatay Farxiyo Nuur Aadan oo heshay kaliya 8 cod, Ayaan Aadan ayaa heshay 79 cod halka 5 cod hallaabeen.
Waxaa la rumeysan yahay in Ayaan noqon doonto sanatarka ugu da’da yara Sanatarada Aqalka Sare, maadaama ay dhalatay 1991-kii, (Siyaad bixiskii), sanadkii dalka laga raacdeyay Kacaankii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Madaxweyaha Mamulka KG, Cabdicasiis Lafta-gareen, ayaa tartanka kursigaan ka reebay sanatarkii ku fadhiyay afartii sano ee la soo dhaafay ee Ilyaas Cali Xasan oo ah Xoghayaha Arrimaha Dibadda Xisbiga Sheekh Shariif ee Himilo Qaran.
Baarlamaankii 10-aad waxaa kursiga lahaa beesha Eelaay, waxaase hadda qaatay beesha loo yaqaan Hariin.
Kursiga 3-aad – Aadan Cabdinaasir Maxamed, oo ah Wasiiru Dawlaha Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka, ayaa 80 cod kaga adkaaday Maxamed Xasan Aadan, oo helay kaliya 6 cod, halka 6 cod oo kalana hallaabeen.
Aadan Cabdinaasir, oo hadda ka tirsan Xukuumadda Rooble, ayaa hore u soo noqday noqday Guddoomiyaha gudigii xulusta Baarlamaankii koowaad ee Koonfur Galbeed, wuxuu ka soo shaqeeyay Madaxtooyada Koofur Galbeed.
Aadn Cabdi Naasir, wuxuu qabaa haweeney la dhalatay marwada Madaxweynaha Koofur galbeed, isla markaana uu aabe u yahay Gen. Mahad Cabdiraxmaan Aadan, oo dadka qaar ugu yeeraan Taliye (Shub).
Afartii sano ee na weydaartay waxaa kusigaan ku fadhiyay Senatar Xuseen Sheekh Maxamuud oo ahaa Xoghayaha Xisbiga MW Xasan Sheekh ee UPD, beesha Hadame ayaa leh kursiga.
Kursiga 4-aad – Maxamuud Cabdinuur Garabey, ayaa 76 cod kaga adkaaday Nuur Baabul Cadow, oo helay 9 cod, halka ay halaabeen 5 cod.
Garabey, aqoon badan looma laha, hayeeshee, sida uu sheegay waligiis kama shaqayn shaqo ka sarreysa Agaasime.
Kurigaan waxaa leh beesha Geeladle, waxaana Baarlamaankii 10-aad, ku fadhiyay Senator Cabdullahi Cabdi Garuun.
Kursiga 5-aad – Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa 71 cod kaga adkaaday Xasan Maxamed Nuur, oo helay 7 cod, halka 10 cod hallaabeen.
2010-2016, wuxuu cilmiga General medicine ka bartay Jaamacadda Banaadir, wuxuuna muddo gaaban ka shaqeeyay isbitaal Madiina ka hor inta uusan noqon Agaasimaha Wasaaradda Cafimaadka Koofur galbeed.
Xuseen Maxamed Daahir, waxaa u dhaxda haweeney la dhalatay xaaska Lafta-gareen, iyo sidoo kale xaaska Aadan Cabdi Naasir, oo isna ka mid ah xildhibaannada maanta soo baxay, saddexda marwo, waxaa dhamaantood aabe u ah Gen. Mahad Cabdiraxmaan Aadan, oo dadka qaar ugu yeeraan Taliye (Shub).
Kursigan uu kusoo baxay waxaa laga qaaday Senator Timiro Maxamed Cali, waxaan leh beesha Yeeladle oo ka tirsan Mirifle.
Xildhibaannada ka soo baxay Koofur Galbeed ayaa ah shaqsiyaad naasnuujin lagu soo saaray, waxayna u badan yihiin dhallinyaro aan hore u soo qaban jagooyin sare, isla-markaana aan ka soo shaqayn shaqooyin heerkoodu sarreeyo, waxayna Aqalka Sare kula biiri doonaan maqaawiir miciya-dhacsatay sida la saadaalinayao oo Fartaag, Xaaf/Qaybdiid, Faroole, Morgan, Cabdi Xaashi iyo wajiyo kale oo waaweyn ka mid yihiin.